Ahlu Sunna: Dadka Galmudug ha is difaacaan - BBC News Somali
Image caption Dowladda Federaalka ayaa maanta Ciidamo hor leh geysay Dhuusamareeb
Xoogagga maamulka Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah go'aanka ay dowladda Federaalka ciidamada ku geyneyso magaalada Dhuusamareeb.
Xalaad jahawareer ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay halkaas, ka dib markii ay saaka gaareen diyaarado hor leh oo waday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wali ma cadda sababta askartaas loo geeyey Dhuusamareeb, dawladdana kama aysan hadlin, hase yeeshee, waxay arrintaasi dareen colaadeed galisay maamulka Ahlu Sunna oo iyagana sida la sheegayo heegan galiyay ciidankooda.
Arrintan ayaa timid xilli dhawaan uu heshiis dhex maray madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamulka Ahlu Sunna, ayna ku heshiiyeen in amniga gobolkaas ay la wareegto xukuumadda dhexe.
Wareejinta ciidamada Ahlu Sunna, sawir ma dhaafsiisan tahay?
Mas'uuliyiinta Ahlu Sunna ay ka baxeen heshiiskaas, iyagoo ka cabanaya qodobbadii la isku afgartay qaarkood "oo la fulin waayay".
War-saxaafadeed ay maanta soo saareen saraakiisha Ahlu Sunna ayey eedeyn culus ugu jeediyeen xukuumadda dhexe waxayna sheegeen inay dagaal qaawan kusoo qaadday Galmudug.
"Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay maamulka dowlad goboleedka Galmudug ee Ahlu Sunna Wal-Jamaaca, waxayna taas ka door bideen weerar iyo dagaal qaawan, iyagoo magaalooyinka Galmudug kasoo buuxiyay ciidamo ay garwadeen ka yihiin madax ka tirsaneyd argagixisada Al-Shabaab, kuwaasoo meesha ka saaray nabadgalyadii deegaannada Galmudug ay heysteen. Maamulka iyo shacabka reer Galmudug, ka dib markaan aragnay inay burbureen dhammaan heshiisyadii la galay, khatar weynna ay ka muuqato, waxaa loo sheegayaa, lana farayaa ciidamada qalabka sida iyo shacabka reer Galmudug inay u diyaar garoobaan difaaca naftooda, dadkooda, dalkooda iyo diintooda, ayna ilaaliyaan nabadgalyadooda faraha laga bixiyay", sidaas waxaa lagu yiri war-saxaafadeed maanta kasoo baxay maamulka Ahlu Sunna.
BBC-da ayaa xiriirro kala duwan la sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya, balse ma suurtagalin inaan ka helno wax jawaab ah.
Hase ahaatee, xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, oo u muuqda inuu la dhacsan yahay tallaabada xukuumadda federaalka ayaa BBC-da u sheegay inuusan jirin wax heshiis ah oo laga baxay.
"Aniga intaan ogahay, waqti xaadirkan Dhuusamareeb waxaa ka socda u diyaar garowga shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, kaasoo loogu talagalay in dib u heshiisiinta ka dib lagu dhiso maamul rasmi ah oo ka shaqeeya Galmudug, maadaama ay waqti adag soo martay, maamulkeediina uu khilaaf awgiis ku burburay. Ahlu Sunna iyo dowladda Federaalka wax bay isku ogyihiin, hadda waxa socda waa tabashooyin ka dhex jira beelaha Galmudug, mana jiro warka sheegaya in dowladdu ay waxyaabo khaldan ka sameyneyso Dhuusamareeb". Ayuu yiri xildhibaan Faarax Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka Federaalka.
Labada dhinac ma waxay qarka u saran yihiin inay dagaallamaan?
Janaraal Maxamed Nuur Galaal, oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in magaalada Dhusamareeb ay ka taagan tahay xiisad colaadeed.
Image caption Janaraal Maxamed Nuur Galaal
"Waxaan maqlay in meesha uu ka jiro diyaar garow dagaal. Wadaaddadii horay meesha u joogay waxay dusha ka fuuleen guryihii saraha ahaa, xarumihii ay heysteenna way adkeeyeen, dowladduna dhankeeda ciidan ayey geysay maanta, horayna wey u geysay. Marka saan saan dagaal ayaa ka jirta halkaas", ayuu yiri Janaraal Galaal.
Wuxuu dhinaca kale ku baaqay in xaaladda la dajiyo, miiska wadahadalkana lagu xalliyo wax walba oo la isku maandhaafsan yahay.
"Waxaa suurtagal ah in dagaalku uu ku fido meelo kale, marka waxaa aniga ila quman in nabadda laga shaqeeyo, dagaalkuna faa'iido ma laha, nin ku guuleysanayana ma jiro", ayuu yiri.
Dhawaan waxaa la qarameeyay qaar badan oo ka mid ah saraakiishii ciidamada Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, balse waxaa lagu soo warramayaa in hadda qaarkood ay dib ugu laabteen fariisimihii hore ee maamulka Ahlu Sunna, ayna ku gacan seyreen heshiiskii dhex maray iyaga iyo dowladda Federaalka.
Wali ma jiro wax war ah oo ay dowladda Federaalka kasoo saartay tabasha Ahlu Sunna, waxaase lasoo tabiyay inay ciidanka Federaalka la wareegeen inta badan xarumihii muhiimka ahaa ee ku yaallay magaalada Dhuusamareeb.
"Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay baalmartay dastuurka iyo wadiiqadi lagu heshiiyey"
Image caption Sheekh Maxamed Shaakir